एलआइसी नेपालबाट ३६% लाभांश वितरणको घोषणा, लगानीकर्ताले यो वर्ष २ पटक बोनस पाउने Bizshala -
किन विश्वकै सस्तो छ भारतको मोबाइल इन्टरनेट ?
विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने संकेत, जापानको निर्यातमा निरन्तर गिरावट
प्रधानमन्त्रीको डिम्याट खाता खुलाउन मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकरको दौड !
शिवमको सेयर सूचिकरण सम्झौता मंगलबार हुने
एलआइसी नेपालबाट ३६% लाभांश वितरणको घोषणा, लगानीकर्ताले यो वर्ष २ पटक बोनस पाउने
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेसन कर्पोरेशन(नेपाल) लिमीटेडले ३६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको साउन २४ गते बिहीबार अपरान्ह ४.३० बजे बसेको ९४ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वषृ ०७३/७४ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.८९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल यो कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ३३ करोड ४६ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँको ३६ प्रतिशतले हुन आउने ४८ करोड ४ लाख ८३ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको हो । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख माथि पुग्नेछ ।
यो निर्णय बीमा समितिको स्वीकृति र आगामी बस्ने बीमकको १६औं वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपपछि लागू हुने एलआइसी नेपालका कम्पनी सचिव विनोदकुमार भूजेलले जानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट यो लाभांश घोषणा भएको हो । कम्पनीले २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनका लागि गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट समेत केही समयपछि अर्को बोनस सेयर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उसले आगामी ५ महिनाभित्रमा २ वटा आर्थिक वर्षको साधारणसभा सक्नुपर्नेछ । यो हिसाबले कम्पनीका सेयरधनीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै २ वटा आर्थिक वर्षको बोनस पाउने देखिन्छ ।
यो कम्पनीले हालसम्मकै सर्वाधिक बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष लगानीकर्तालाई निकै आकर्षक बोनस खुवाउँदै आएको कम्पनीको बोनस इतिहास टेबलमा देखाइएको छ:
lic nepal LIFE INSURANCE CORPORATION(NEPAL) LTD. bonus share
सोलुखुम्बुको पासाङल्हामुमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
मकवानपुरको रजैयामा सिटिजन्स बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
प्रभू बैंकले एकैदिन प्रदेश १ का दुई स्थानमा शाखा खोल्यो
ललितपुरमा नयाँ निजी विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध !
‘बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीको घर घेर्ने कार्यक्रम-गैरव्यवसायिक र अबाञ्छित’
प्रधानमन्त्रीको डिम्याट खाता खुलाउन मर्चेन्ट बैंकर र
काठमाण्डौ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत छनौट...
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्टको सेयर दोश्रो बजारमा यही साताभित्र...
प्रफिट बुकको हतारोले बजारमा गिरावट, यूनाइटेड फाइनान्सको
काठमाण्डौ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार ७.४७ अंकले घटेर ११५३.९८...
नेप्सेमा शिवमको सेयर यही साता सूचिकरण हुने
स्पर्शको आइपीओ बाँडफाँड चैत १० वा ११ गते !
काठमाण्डौ । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओको...
चैत १३ देखि युनियन हाइड्रोको आइपीओ, वित्तीय अवस्था कमजोर
काठमाण्डौ । युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले आयोजना प्रभावित...
मनिस लोहियाले चौथोपटक नेप्सेमा उजुरी दिए, न्याय दिलाउने
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सोह्र वर्षअघि आफूले किनेको नेपाल...
प्रफिट बुक गर्ने र सेयर उठाउनेको टक्कर, बजार मजबुत बन्दै
काठमाण्डौ । गत साता लगातार बढेको बजारबाट प्रफिट बुक गर्ने र मूल्य...